Siyaasadda Google AdWords - Raac Xeerarkaas!
Saturday, April 30, 2011 Sabti, Febraayo 4, 2017 Chris Bross
Xayeysiisyada qoraalkaaga miyaa laguma diidin ku xad gudubka tifaftirka ama sumadda ganacsiga? Haddii aad wax walba si sax ah u samaysay, maxaad Google kaaga qaylinaysaa?
AdWords marna isla markiiba kuguma wargalinayso, xayeysiis badan oo qoraal ah si dib loogu eego hal mar. Waxay leeyihiin algorithms-kooda oo ogaan doona ad qoraalkaaga haddii aad ku xad gudubtay siyaasaddooda. Baadhitaanku had iyo jeer waa ka dib xaqiiqda oo aan macluumaad badan laga hayn sababta. Aad u jahwareersan!
Dabcan waxaad kaheleysaa emayl saaxiibtinimo LPQ-Support@Google.com oo leh khadka maadada; Koontadaada Xayeysiiska Google waxay leedahay xadgudubyo badan! Ha iska indha tirin emaylkan, maxaa yeelay AdWords ayaa joojin doona koontadaada haddii xadgudubku sii socdo. Habka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo qalbi jabka, iyo xisaabtanka waqtiga la joogo, waa in si fiican loo fahmo Nidaamka Xayeysiiska Google.
At EverFffect, Nasiib ayaan ku leenahay inaan helno Googler-keena hore oo ah kheyraad caan ah markaan u baahanahay inaan wax ka qabanno Nidaamka AdWords. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyinka ay tahay inay maskaxda ku hayaan dhammaan khubarada PPC.
Diiwaanka Isbedelka Siyaasadda
AdWords waxay leedahay qiyaaso isku mid ah siyaasadaha caalamiga ah iyo kuwa gaarka u leh wadanka ee xukuma nooc kasta oo xayeysiin ah. Ku dar taas xaqiiqda ah in siyaasaddu si isdaba joog ah isu beddeleyso si ay ula socoto xawaaraha burburka ee warshadaha. Adduunkeenna casriga ah ee qaangaarka ah, miyaanay fiicnaan lahayn haddii aad ku rakibi lahayd nidaamka digniinta rogista boodhkaaga oo kaa ilaalin doonta inaad ka warqabto isbeddelada siyaasadeed ee xayeysiinta markay dhacaan? Qiyaas waxa: Google waxay leedahay wax ku dhow sida qabow. Waxaa loo yaqaan Diiwaanka Isbedelka Siyaasadda, oo haddii aadan hore u aqoonna waxaan kugula talinayaa inaad ku darto buug.
Waa bog liis garaya isbeddelada siyaasadeed ee xayeysiinta sida ay u dhacayaan, ama xitaa waxyar ka horreeya bilaabitaankooda. Adiga oo caado ka dhiganaya inaad xilligan si joogto ah u hubiso, waad ka sii horrayn kartaa qalooca oo waxaad ka hortagi kartaa xayeysiinta inay hoos u soo dhacaan mahadnaqa isbeddelada lama filaanka ah ee Nidaamka AdWords.
Arimaha Siyaasada Xaqiiqda ee Qorshahaaga Ciyaaraha PPC
Furaha ayaa ah in la barto sida si wax ku ool ah loogu xalliyo arrimaha siyaasadda, loo xaliyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, iyo qaabeynta koontadaada si looga hortago xayeysiiska inuu hoos u dhaco mustaqbalka.
Markaad samaynayso wax hagaajin koonto ah PPC, waa inaadan xoqin dhammaan xayeysiiskaaga oo aad ku beddesho kuwa cusub ilaa aad diyaar u tahay inaad wax walba ka saarto komishanka in yar.
Fahmitaanka tan, iyo sidoo kale xaqiiqda ah in xayeysiisyo badan ay u baahan doonaan in dib u eegis lagu sameeyo ka hor inta aan loo qalmin in la ordo, waa inaad ka fileysaa inay jiri karto waqti hoos u dhac ah (midkoodna dib u eegista ama diidmada xayeysiinta) ka hor inta aysan xayeysiimahaaga cusubi socon oo socon awoodooda buuxda. Marka, haddii aadan rabin inaad joojiso dhammaan xayeysiintaada, waxa caqliga leh ee la sameeyo ayaa ah dhawr ka mid ah xayeysiiskaaga hadda kor ha u qaad intaad ku guda jirto koontadaada 'dayactir'.
Si aad u fudud, hadana waa wax la yaab leh sida xiisaha xayeysiinta xayeysiintu u sababi karto xanibaado markii maareeyaha koontada PPC 'guga uu nadiifiyo' wax walba goor hore.
Siyaasadda Astaanta Ganacsiga
Mareykanka dhexdiisa, waxa ugu horreeya ee lagu xuso Siyaasadda Astaanta Ganacsiga ee AdWords waa taas kaliya xukuma qoraalka xayeysiiska, mana saameyn doono ereyada muhiimka ah. Markay had iyo jeer sheegaan, Google waxay rabtaa inay u oggolaato xayeysiistayaasha xorriyadda ugu badan ee suurtogalka ah xulashada ereyadooda muhiimka ah, iyo sida Mareykanka oo kale ma kormeeraan ereyada calaamadaha ganacsiga ee ereyada muhiimka ah. Tani waxay ka dhigan tahay haddii aad tahay milkiile astaan ​​ganacsi oo aad ka xanaaqsan tahay in xayeysiiska tartame uu soo muuqanayo markii ereygaaga ganacsiga lagu calaamadeeyay la gelayo baarka raadinta Google-raali ahaw, nasiib wanaag waad ka baxday.
Su'aasha xigta ee laga jawaabayo ayaa ah sida Google u kormeero calaamadaha ganacsiga ee qoraalka xayeysiiska ah. Haddii aadan ka diiwaangelin ereygaaga summad-ganacsi ee Google oo aad ka codsato inay kormeeraan, astaamahaaga ganacsi lama kormeerayo. Muddo! Sababtoo ah waxaan u maleynayo inay tahay xaddidaadda ilaha, Google si firfircoon uma baareyso ereyada calaamadaha lagu haysto si ay ugu sii socoto feylka kormeerka, sidaa darteedna waa inaad soo gudbisaa cabasho TM si aad u bilowdo hawsha kormeerka.
Waxa kaliya ee hadda haray ayaa ah in la hubiyo inaad cadayato Nidaamkaaga AdWord ee ku saabsan Warshadaha Daawooyinka. Midkani wuu yara dhib badan yahay wuxuuna mudan yahay qoraalkiisa own la soco!
Tags: google adwordssiyaasada adwords googleCabir CP
Jul 18, 2011 markay tahay 2:14 PM
Kaliya waxaan ku orday maqaalkan saaka. Waxaan jeclaan lahaa inaan la wadaago khibradeyda usbuucii la soo dhaafay Google, oo aan maqlo haddii uu jiro qof wax la mid ah ku dhacay iyaga…
Waxaan ku cusbahay shaqadan, kaliya waxaan shaqeeyey waqti buuxa hada 2 usbuuc (waqti dhiman 2 bilood kahor). Waxaan ka gaadhay heerka “shaqsi aqoon leh” Google toddobaad ka hor.
Toddobaadkii hore ka dib markii aan ku cayaaray siyaasadooda calaamadaha waqtiga aan halkaan ka shaqeynayay, waxaan gaaray meeshii ugu jabneyd. Waxaan haystay xayeysiisyo dhowr ah oo cusub oo aan si weyn uga duwaneyn adeegsiga ereyada astaan ​​ganacsi marka loo eego xayeysiisyada kale ee horay loo oggolaaday. Waxaan diray emayl, anigoo weydiisanaya in la cadeeyo sababta xayeysiisyadan loo diiday halka kuwa kale ay fiicnaayeen.
Sidaad uga faallootay ereyada muhiimka ah, fahamkaygu waa in ereyada furaha ahi ay yihiin arrin ka duwan qoraalka ad. Hase yeeshe markii aan ka helay jawaabta Google ee ku saabsan weydiintayda, waa tan waxa ay igu yiraahdeen oo ku saabsan ereyada muhiimka ah ee aan ku dhex lahaa kooxahan xayeysiinta ah:
Qaar ka mid ah ereyada muhiimka ah waa mug raadis hooseeya waxayna kuwani saameyn ku yeelan karaan go'aanka ugu dambeeya ee xayeysiintaada, sidaa darteed, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad ka saarto ereyada muhiimka ah liistadaada muhiimka ah. "
Markii aan mar kale qoray si aan u waydiiyo sharaxaad ku saabsan mawduucan oo miyay fadlan ii tilmaami karaan waxyaabo aan akhrin karo si aan uga caawiyo kahortaga dhibaatada mustaqbalka, wax caawimaad ah ma aysan soo bandhigin. Laba jeer ayaa laygu sheegay inaan ka saaro keywords key mugga raadinta oo aan dhaqaajiyo ereyada muhiimka ah ee hakadka ku jira maadaama kuwani mararka qaar saameyn ku yeelan doonaan ansixinta xayeysiinta. Sababta
Apr 18, 2012 at 1: 34 PM
Koontadayda 'Google Adwords' ma shaqeyneyn muddo ku dhow hal sano. Laakiin ugu dambeyntii waxaan ku shubay $ 10 koontadayda adwords, waxaan u abuuray xayeysiis degelkeyga cusub. Maalintii ku xigtay Google ayaa hakisay akoonkeyga. Waxaan u diray emayl oo waxaan waydiiyey sababta ay u hakiyeen, waxayna dib u qoreen oo ay yiraahdeen ma awoodo inay ka saaraan, waxayna i siiyeen sabab sababta. Waxaan aqriyay siyaasadooda xayeysiinta iwm, wax khalad ahna uma arko xayeysiiskeyga ama degelkeyga. Xayeysiintu waxay toos ugu xireysaa boggeyga iibka, waxaanan iibinayaa alaab daacad ah oo igu kalliftay dhowr kun oo doller oo ay igu abuureen barnaamijyayaashu. Waxaa laga yaabaa in Google Adwords aysan mar dambe u oggolaan dadka inay ku xirmaan bogga iibka? Ma garan karo tan. Waxaan ku soo daray qiimaha sheygeyga Xayeysiiska sidaa darteed dadka awooda inay awoodaan oo kaliya ayaa riixi kara xiriirka. Qiimaha ku jira Xayeysiiska miyaa xisaabteyda la hakiyay? Tani waa wareer isku dayga ah in la ogaado. Waxaa laga yaabaa inaan baajiyo koontada, aan waayo $ 10, oo aan dib ugu bilaabo xisaab cusub. Laakiin marka la eego ereyada waxay leedahay haddii koontada la joojiyo koonto kale oo cusub oo aan abuuro weligood waa la joojinayaa, mana awoodi doono inaan la sii xayaysiiyo mar dambe. Tani waa mid aad u jahwareersan.
100% waad ku saxantahay isticmaalka nuqulka xayeysiiska la bartilmaameedsaday iyo qaab dhismeedka erayga muhiimka ah - waxaan leenahay macmiil taayirrada gawaarida gawaarida / gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida. Hadaad jeceshahay inaan fiiriyo koontadaada oo aan maskaxda galiyo talooyinka qaarkood email iigu soo dir simon.b@resultsdriven.org. ama waxaan dajin karnaa wicitaan deg deg ah haddii aad doorbideyso telefoonka 302-401-4478.